मुद्दामा एक भएपछि पौडेल र सिटौलालाई जोड्ने भूमिकामा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीदेखि युवा नेताहरू गगन थापा, प्रदीप पौडेलसम्म जुटे । आधा दर्जनजति गोप्य बैठक बसेर यी दुई नेताबीचको सम्बन्धलाई जोड्ने काम भएको छ । नेतृत्वका सवालमा भने दुवैका आआफ्ना स्वार्थ र प्रतिस्पर्धा छन् ।
(यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।)
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ०४, २०७५०७:५८
अन्याय गरेर छोएमा भष्म हुने ‘श्रीयन्त्र’ सर्वोच्च अदालतबाट गायब !
यी हुन् साउन महिनामा उत्कृष्ट काम गरेको कारण पुरस्कृत हुने १२ प्रहरी !
राजपाको ढिपी र फोरमको लालचले फोरम–राजपा एकता अन्योलमा !
यी हुन् राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने सम्भावित सदस्यहरु (नामावली हेर्नुहोस)
संगठित सुन तस्करी : यी ४ अभियुक्तविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी